Birch - isihlahla engavamile, okuyinto engenakwenzeka ukudida ke nanoma iyiphi enye. Kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube abantu baseRussia baye izingoma, izaga kanye namazwi-birch, bayahlonishwa wayemuhle futhi walazisa Lara wakhe: izinkuni, itiyela, amagxolo, kanye yemvelo birch juice - isiphuzo esiqabulayo omkhulu enempilo. Birch ubisi kuyinto esobala kuphela ukunambitheka kancane elimnandi, naphezu Izinga likashukela-2%. Lokhu isiphuzo eco-friendly kuyinto ecebile amaprotheni, amavithamini, acid organic, izakhi trace kanye uletha eningi izinzuzo zezempilo. Birch ubisi ongabhubhisa ezinso, kusiza yezifo gallbladder futhi isibindi. Futhi, kuyasiza kakhulu ukugaya, kusiza ahlanze umzimba kusuka zonke izinhlobo izinto eziyingozi futhi kuyinto enhle kakhulu tonic ithuluzi. Spring usuku akukho lutho olungcono kuka ingilazi isiphuzo esihle okumsulwa yemvelo futhi kuqabule, okusiletha isipho Imvelo uqobo lwayo. Futhi ngeshwa kakhulu ukuthi ngesikhathi lapho ungakwazi ukuqoqa birch ubisi, iningi lezakhamizi ezisemadolobheni abanalo leli thuba elihle kangaka. Ngisho noma ezitolo futhi ungakwazi ukuthenga lokhu isiphuzo ukuwafaka nje leyo ndawo ilahlekelwa iningi izakhiwo zalo ezuzisayo. A fresh birch ubisi lilondolozwe imbala akukho kuka kwezinsuku ezimbili noma ezintathu, bese uqala lwalungabola.
Futhi uma ungakwazi ukuqoqa birch ubisi? Indlela ukukwenza? Ake sicabangele ngokuningiliziwe izimpendulo zale mibuzo. Ngokuvamile, ekuqaleni kwesizini, uma uqoqa ubisi birch angabhekwa maphakathi no-March, kodwa ngalesi sikhathi sixhomeke kakhulu sezulu kanye izimo zezulu yesifunda unyaka ngamunye. Qala ukuqoqa ijusi ngangokunokwenzeka lapho iqhwa liyancibilika. Khona-ke izimpande isihlahla iqala ukuba amanzi ukugeleza, futhi konke kuyatholakala kule izimpande futhi isiqu isitokwe isitashi iguqulwe ibe ushukela, oncibilikayo emanzini. Le isixazululo likhwela isiqu ukuze sinike litsemba lemphilo emculwini imifino fresh. Collection sikhathi, ngeshwa, sifushane kakhulu - cishe amabili kuphela amasonto - kuze amahlamvu yokuqala esihlahleni. Kungcono juice uhamba esekhonjwe engxenyeni yokuqala yosuku, nalapho ilanga kuphazima okusezingeni eliphezulu. Ukuze ukwazi ukubona ngokunembile ukuthi isikhathi eside elindelwe ifikile juice iqoqo, kudingeka wenze wokubhoboza encane ebhange nge spike mncane. Uma isayithi ukulimala imele iconsi juice - ke usukulungele ukuqoqa. Kungcono ukukhetha izihlahla, emi endaweni ephakeme nomuzi imiphetho evulekile - lapho eziningi ilanga. Umpe birch has a okuqukethwe ephakeme izakhamzimba.
Kubalulekile kakhulu inqubo lokuqoqa ijusi akulimazi wona kanye birch. Kufanele kube Ukulalelisisa kakhulu kukhethwa ukhuni le njongo. Kukhona amacala lapho akunakwenzeka ukuqoqa birch ubisi akuyona nganoma iyiphi indlela - ke eyobulala birch. I oyisisekelo: kwesihlahla akufanele kube usemncane kakhulu noma osemdala kakhulu. Kuyaziwa ukuthi engu-isihlahla kunqunywa ukushuba umboko wayo, ngakho best choice Buda birch nge ububanzi 20-30 ngamasentimitha. Ngaphezu kwalokho, isihlahla akufanele kube ogulayo. Njengoba sekushiwo, kungcono ufune birch, okuyinto ubona inala kwelanga. Omunye akufanele sibe abahahayo bese uzama ukuthatha kwesihlahla ezingaphezu kuka kunganikeza: ilitha juice esikhathini esiyizinsuku ezingu 2-3 kwanele. Ngokukhetha isihlahla efanelekayo kufanele kwenziwe amagxolo yakhe umgodi ishizolo noma ummese. Umgodi akumelwe kube ejulile ngokweqile. It ibekwe tube noma inkatho kuyinto aluminiyamu noma zepulasitiki, okuyothi ngalo ijusi oyophunyuka ngaphandle. Manje uhlala kuphela ukuba angene esikhundleni umkhumbi ofanele ukuqoqa ijusi kanye ngezikhathi hlola nokuligcwalisile. Kwezinye izimo, ukumane hang ibhodlela igatsha eziphukile, ngaphandle kokudala umonakalo owengeziwe birch.
Manje, ukwazi kanjani futhi nini ukuqoqa birch ubisi, singasebenzisa ulwazi futhi uthole injabulo Amazing futhi bazuze ukusetshenziswa isiphuzo ezimangalisayo zemvelo, elihambisana nathi Birch - emangalisayo futhi ayithandayo wonke umuntu kule ukhuni Russian.
Mead Suzdal (Suzdal Mead ifektri). ubhiya iziphuzo
Lo mlingisi Carolina Dieckmann: Biography, Filmography futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Essie nail polishes - likhetha eziningi ozinikezele lanamuhla